Iimpawu zoMgca weeMpawu zokuSebenza kweRobotic Positioning - i-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
NguLisa Eitel • Amathrekhi wokubeka i-Robot angongeza ukwandisa ukuguquguquka kwiindawo zokuvelisa, kodwa kufuneka zikhawuleze, zichaneke kwaye zikhuselekile ukuba luncedo ngokwenene. Apha sibheka ukujonga kwiimoto ezithumelayo.
Iinkqubo zokubeka iRobot ziinkalo ezinde kwi-garaji, i-aerospace, kunye neendawo zokuhamba ngeemoto ukuvumela i-robot enye ukwenza imisebenzi emininzi. Kwakhona kuthiwa ngamagumbi okudlulisa i-robot okanye i-RTU, ezi ziyilo zokunyakaza ziya ngokuqhelekileyo kwiintlanganiso, ukunyusa okukhulu kunye nokugcinwa kwempahla.
Ngokuphambene neesetups eziqhelekileyo apho i-robot ibhoxisa kumgangatho, i-RTU ihambisa ama-robot ngokusebenza-amaseli kunye namafektri kwaye iyawahambisa phakathi kwezitishi. I-setups ezilungileyo ze-RTU zizakhiwa nje okanye apho iinkqubo kunye noomatshini abadibeneyo kunokufakwa ngokulandelelana. Xa i-RTU ihamba iirobhothi ezithandathu-i-axis, amathrekhi aqhelekileyo maxa wambi kuthiwa i-axis yesixhenxe (okanye ngaphantsi, xa i-robot ngokwayo inamanqanaba asixhenxe enkululeko, i-axis axis). Xa ezi ngoma ziyinxalenye yesakhelo, kubandakanywa amafowuni apho i-robot ixhomeke khona, i-gantries.
Kungakhathaliseki ukuba i-robot okanye i-morphology yomkhondo, ingongoma yesicatshulwa esongezelelweyo kukuongeza inkqubela yokuguqulela. Oku kwandisa imvulophu yomsebenzi okanye ivumela umsebenzi wezothutho-umsebenzi okanye izixhobo. Kwamanye amalungiselelo, i-former ivumela i-robot ithathe uomatshini abaninzi okanye ukhethe iipellets ezivela kwimigca, okanye umatshini omkhulu kakhulu. Ezi zilandelayo, izicelo eziqhelekileyo zipakisha, ukuhambisa, ukusika i-plasma-arc, kunye neminye imisebenzi.
Nantsi sigxininisa kwiindlela zokuqhuba i-RTU. Nangona kunjalo, qaphela ukuba iinjineli kufuneka zenze isigqibo phakathi kweendidi zezikhokelo kunye neebherethi (ngokuqhelekileyo ngendlela yabalandeli bekham okanye izikhokelo zeprofayili).